Ma taqaan qeexitaanka iyo noocyada fiilooyinka gaarka ah? - Wararka - Dongguan Jianxing Products Outdoor Co., Ltd.
Fiilooyinka iyo fiilooyinka gaarka ah waa alaabooyin taxane ah oo leh astaamo u gaar ah iyo qaabab gaar ah, kuwaas oo u dhigma fiilooyin caadi ah iyo fiilooyin tiro badan iyo baaxad ballaaran. Waxay leeyihiin astaamaha sifooyinka farsamada sare, xaaladaha isticmaalka adag, dufcadaha yaryar, iyo qiimaha lagu kordhiyay. Qalab cusub, qaab-dhismeedyo cusub, habab cusub iyo xisaabinta naqshad cusub ayaa badanaa la isticmaalaa. Fiilooyinka iyo fiilooyinka noocan oo kale ah ayaa qiyaas ahaan loogu qaybin karaa afarta qaybood ee soo socda:
Xarig heer sare ah iyo fiilo adkaysi leh
Heerarka sare ee fiilooyinka iyo fiilooyinka adkaysiga leh ayaa looga baahan yahay aerospace, keydka duudduuban, tamarta, birta iyo birta, dhalaalida biraha aan birta ahayn, baaritaanka batroolka, iyo matoorrada korantada. Heerkulka joogtada ah ee shaqeeya ee muddada dheer ah 125 darajo, 135 digrii, 150 darajo, 180 digrii, 200 darajo, 250 darajo iyo 250 darajo oo ka sareeya siligga caabbinta heerkulka sare iyo fiilada, hada inta badan la isticmaalo waa shucaaca iskutallaabta ku xiran polyolefin, caag silikoon, fluororesin, polyamide Fiilo iyo xarig sida imine, mica, magnesium oxide, iwm.
Fiilooyinka iyo fiilooyinka ujeeddada iyo qaabdhismeedka gaarka ah leh
1. Fiilo xarig-galid hooseysa
Waxaa jira mawjado xoog leh iyo durdurro daciif ah. Halkan waxaa ku yaal fiilo-soo-qaadis hooseysa oo loogu talagalay mawjadaha xoogga leh. Fiiladan waxaa lagu qalabeeyaa aaladda kala-baxa kuleylka. Waxaa loo isticmaalaa isku xirka dhammaan noocyada mashiinnada alxanka xiriirka, mashiinnada alxanka qaanso iyo silsilado alxanka pneumatic. Waxay leedahay qaab-dhismeed fudud oo macquul ah, socodka biyaha qaboojinta badan, iyo xannibaad la'aan. Astaamaha sida xanibaada iyo xaddidida hadda, kala-baxa kuleylka wanaagsan, iyo nolosha dheer. xudunta fiilada iyo xudunta fiilada ee taban ee lagu rakibay tuubbada caagga ah.
2. Xarka dhawaaqa hooseeya
Marka la eego ficillada arrimaha dibadda sida foorarsiga, gariirka, saameynta, iyo isbeddelka heerkulka, fiilada calaamadda garaaca wadnaha ee ay soo saarto xarigga laftiisu ka yar yahay 5mV waxaa lagu magacaabaa fiilo buuq yar, oo sidoo kale loo yaqaan fiilo qalab aan naxdin lahayn. Waxaa loo adeegsadaa cabbirka calaamadaha yaryar ee dhinacyo badan sida warshadaha, daawada iyo difaaca qaranka. Waxaa jira fiilooyin aan buuq lahayn oo polyetylen ah, fiilooyinka F46 oo dahaaran, fiilooyinka shucaaca u adkaysta ee dhawaaqa hooseeya, fiilooyinka awooda yar iyo dhawaqa yar, fiilooyinka hydrophone-ka, fiilooyinka biyaha celiya iyo kuwa buuqa yar, iyo noocyo badan oo fiilooyin ah.
Fiilooyinka shaqeeya iyo fiilooyinka
1. Is-xakamaynta xaydha ay ku jirto Fluorine-ka iyo xasiloonida heerka 135 heer kul
Xarig heerkulka is-xakameynaya oo ah 135-degree oo ka kooban polyvinylidene fluoride (PVDF) / fluororubber alloy / carbon composites compound. Baaxaddeeda kuleylka ahi way ka duwan tahay, taas oo muujinaysa heerar kala duwan oo ah habdhaqanka PTC iyo xasilloonida tabinta. Tani waa sababta oo ah heerka crystallinity iyo qaabka crystalline ee matrixka ay saameeyeen xawaare kala duwan oo qaboojin ah oo loogu talagalay daboolka.
2. Xarig koronto
Xarigga korantada ayaa ah badeecada ugu dambeysa ee muuqaalka iftiinka caalamiga ah. Muuqaalkeedu wuxuu la mid yahay fiilooyinka caadiga ah iyo fiilooyinka. Dusha sare wuxuu ka samaysan yahay gacmo balaastik midab leh oo midab leh. Waxay si joogto ah u sii deysaa iyada oo aan lahayn shucaac kuleyl ah marka ay shaqeyneyso, isticmaalkiisuna waa 50-60% oo keliya nalalka LED-ka. , 20-30% nalalka xargaha, 1-5% nalalka neon; alaabooyinka noocan oo kale ah ayaa si ballaaran loo isticmaalaa, iyagoo abuuraya xilli cusub oo tamar-badbaadin ah, bey'adeed u roon, iyo nalal bandhig caafimaad leh.
The cable that can pass UL's highest flame retardant grade standard is Fiilooyinka CMP. The three companies Dubang, Lucent and BICC have done a lot of burning tests on wires and cables, and researched it out that a thin layer of FEP (ie F46) sheath is squeezed out of ordinary cables to meet this requirement.
Guud ahaan marka la hadlayo, qiiqa-hooseeya iyo walxaha aan halogeen lahayn waa polyolefin, kaas oo leh kalooriye shidaalkiisu sareeyo oo aad u holcaya. Sidaa darteed, waa in lagu qasaa fiilooyinka fuuqbaxa biraha si loo xakameeyo ololkiisa, laakiin biyaha loogu talagalay fuuqbixinta Daal ka dib, waxay sababi doontaa gubasho kulul. Si kastaba ha noqotee, kuleylka FEP waa mid aad u yar, mana gubanayo haddii uu dab dhaco.
Warshadaha Tareenka ee Guangdong waxay kordhisaa shaqaalaha